महानायक अमिताभले खुलाएको गोप्यताले सबै चकित ! – Jagaran Nepal
महानायक अमिताभले खुलाएको गोप्यताले सबै चकित !
काठमाडौं । अहिले अमिताभ बच्चन “कौन बनेगा करोडपति १३” को होस्टको रुपमा देखिने गरेका छन् । हालैको एक एपिसोडमा उनले आफ्नो बारेमा गम्भीर खुलासा गरेका हुन् ।
उनले बच्चन उपनाम कसरी पाएको भन्ने विषयमा विस्तृत रुपमा जानकारी दिएका छन् । वास्तवमा, बिग बी एक प्रतियोगी भाग्यश्री तायडेसँग हट सीटमा बसेर कुरा गर्दै थिए ।
कार्यक्रमको बीचमा भाग्यश्रीले बिग बीलाई आफ्नो प्रेम विवाह भएपछि, परिवारले आफुसंग सम्बन्ध तोडेको कुरा सुनाइन् । त्यो मात्र नभई उनी आमा भएपछि पनि उनका बुवा उनीकहाँ आएनन् ।
उनले एक छोरीलाई जन्म दिएपछि उनका बुबाको रिस शान्त भएन र उनी आफ्नी नातिनी र सुत्केरी छोरीलाई भेट्न गएनन् । भाग्यश्रीका यी शब्दहरु सुनेर दुःखी भएका अमिताभ बच्चनले भाग्यश्रीका बुबालाई आफ्नो रिस शान्त गरेर छोरी संगको सम्बन्ध पुनः बहाल गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
बिग बीले भने,“म आफैं अन्तरजातीय विवाहबाट जन्मिएको हुँ”
त्यस पछि बिग बीले भने, “म यो कुरालाई व्यक्तिगत रूपमा लिन्छु, किनकि म आफैं पनि अन्तरजातीय विवाहबाट जन्मेको हुँ ।
मेरी आमा एक सिख परिवारबाट हुनुहुन्थ्यो, मेरो बुबा उत्तर प्रदेशमा बस्ने एक कायस्थ परिवारबाट हुनुहुन्थ्यो । दुबै परिवार उक्त विवाहको पक्षमा थिएनन् तर सबै जना सहमत भए र बिहे भयो । यो १९४२ को कुरा हो ।” उनले बच्चन उपनाम पछाडिको कथा पनि सुनाएका छन् ।
बच्चनले भने, “मेरो बुबाले हामीलाई बच्चन उपनाम (थर) दिनुभयो किनकि यसले कुनै जात प्रकट गर्दैन । जब म स्कूल मा भर्ना भएँ, मेरो उपनाम सोधिएको थियो । त्यसबेला मेरा आमा बुबाले निर्णय गर्नुभयो कि उनीहरु मलाई कुनै थर वा धर्म को प्रतिनिधित्व गर्ने थर दिन चाहँदैनन्।
त्यस कारण, दुबैले निर्णय गरे, उनीहरु मलाई मेरो बुबा को नाम “बच्चन“ उपनाम दिनेछन् । बच्चन शब्द मेरो बुवाले कविको रूप मा प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो ।” तपाईंलाई जानकारी गराउँ कि अमिताभ बच्चनका बुबाको नाम हरिवंश राय बच्चन र आमाको नाम तेजी बच्चन हो ।